Markets.com - Mụta ahia 2
£ 100 kacha nta ego
Mara: N'oge a na-ede nyocha a, market.com mere akara ọzọ na Nọvemba 2019 ma gbanwere aha ya MarketsX. Ka o sina dị, na nyocha a, anyị ga-ezo aka MarketsX dị ka Markets.com maka nghọta dị mfe maka ndị na-amaghị mgbanwe aha.
kacha nta ego £ 100
Onu ogugu 4
Ofdị Akụ CFD, Forex, Crypto, Ebuka
Markets.com bụ onye na-ere ahịa FX na CFD zuru ụwa ọnụ. Guzobe ya na 2008, ndi Markets.com jikwa Safecap Investment Limited nke ndi Cypriot Cysec na South Africa FSCA na-achi achi ndi oru software nke amara dika Playtech. Ọtụtụ na-ele Markets.com anya dị ka nchekwa ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ nne na nna ya, bụ Playtech, dị na ngwaahịa ngwaahịa London ma bụrụ mpaghara nke FTSE 250 Index.
Ugbu a, ikpo okwu na-enye ahia karịa ihe 2,000 dị ka CFDs, Forex, ebuka, indices, cryptocurrencies, bonds, and ETFs. Ihe karịrị nde mmadụ 5 debanyere aha, ikpo okwu a na-enweta ihe dị ka nde ahịa 13 nde na-etinye kwa afọ nke na-atụgharị ihe dịka $ 185 nde na ọnụ ahịa ahịa. Ọzọkwa, Markets.com na-enye interface azụmaahịa ọhụụ na-amasị ndị ahịa dị mkpa karịa ndị ọrụ aka.
E hiwere Markets.com na 2006 wee bụrụ onye azụmaahịa akwadoro na 2008. Ọ toro n'ime onye na-ere ahịa aha ọma na obere oge nke enyerela aka site na ịmekọrịta ndị mmekọ dị elu na ụlọ ọrụ ahụ. Dika ozi enwetara site na Trabọchị Day.com, kasuwan.com nwere ọtụtụ onyinye n'okpuru eriri ya gụnyere:
Award maka kacha mma ore na Ahịa Service Europe 2012 (Global Banking na Finance Review)
Award maka Kachasị Ahịa Ọrụ 2012 (London Investor Show Forex)
Onyinye onyinye maka afọ asatọ nke afọ 2017 (UK Forex Awards)
Award maka Best Forex Trading Platform 2017 (UK Forex Awards)
Uru na ọghọm dị na Markets.com
Ọ na-enye ụgwọ azụmaahịa dị ala
Usoro mmeghe akaụntụ ahụ dị oke mma na ngwa ngwa
Na-enye ọtụtụ ngwaọrụ nyocha ọhụụ
Ọ na-enye ọtụtụ akụ dị iche iche iji zụọ ahịa
Ọ na-enye ọmarịcha ikpo okwu MarketsX Web nyiwe nke bụ onye mbido enyi na ọgaranya.
Ọ na-enye ọtụtụ ụdị azụmaahịa na nhọrọ nkwado ndị ahịa
Ngwa mkpanaka ya na-enweghị mmekọrịta na ya na ntanetị.
Inye otutu nyiwe ahia di iche-iche tinyere ebe ikpo okwu di na webusaiti.
Officeslọ ọrụ ụwa na-enye ohere dị mfe ma na-agbanwe agbanwe dị ka nhọrọ dị elu na / ma ọ bụ nkwalite ego.
Ihe ikpo okwu a n’enyeghi ihe ọghọm.
Enwere mkpesa nke ụgwọ zoro ezo na ụgwọ
Ha nwere oke ihe omumu na ahia ha
Ha na-enye ọkwa dị elu karịa ọnụego mgbanwe.
Uzo ha nwere oru ozi oma.
Ha anaghị akwado nkwado izu ụka. Naanị ụbọchị azụmahịa.
Ndị ọrụ si US, Canada, Belgium, Australia, Japan, na India enweghị ohere ịnweta usoro azụmaahịa.
Markets.com nwere nkwado maka ahia Bitcoin Futures, Ethereum, Litecoin, Dash, Ripple, na Bitcoin Cash. Agbanyeghị, ndị ahịa nwere ike zụọ ahịa CFD nke cryptocurrency nke pụtara na ha enweghị ike ijide akụ dijitalụ ọ bụla. Maka nke a, ọ dịghị mkpa ịmepụta obere akpa mkpuchi cryptocurrency ka ị nwere ike ijikwa akụ niile site na mma nke ikpo okwu. Na mgbakwunye, azụmaahịa cryptocurrency na-ewere ọnọdụ 24/7 na ọdịnihu Bitcoin na-ezumike n'etiti 22:00 na 23:00 GMT.
Otu esi edebanye aha na ahia na Markets.com
Denye aha n'elu ikpo okwu bụ usoro dị mfe ma kwụ ọtọ. Enwere nkuzi vidiyo na saịtị ha nke na - eburu gị n'usoro ma ọ bụrụ na ọ na-esiri onye ọ bụla ike. Ozugbo ịmalite ndebanye aha, ịkwesịrị ịnye ozi bụ isi dịka aha gị, akara ekwentị, ụbọchị ọmụmụ na adreesị gị. Emechaa, ikwesiri ịkọwa ozi gbasara ego na ụtụ isi gị. N'ikpeazụ, a ga-enwe ajụjụ ole na ole ga-egosi ahụmịhe ahịa gị na njikwa ego gị na azụmaahịa.
Ozugbo ị debanyere aha na akaụntụ, ị ga-edozi ọtụtụ akwụkwọ maka nkwenye. Nke a bụ n'agbanyeghị ụlọ ọrụ ọ bụla ị kpebiri idebanye. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịbanye na akaụntụ e debara aha gị wee banye na 'Nkwenye'. Ozugbo ị ruru, ị ga-ahụ ngalaba ebe ị nwere ike bulite akwụkwọ maka ihe akaebe nke ebe obibi na njirimara (POR na POI). Akwụkwọ ndị bara uru maka POI gụnyere kaadị ID mba, paspọtụ, na akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala. Maka POR, akwụkwọ ahụ nwere ike ịbụ ụgwọ ọrụ ọ bụla: mmiri, ọkụ eletrik, gas, ekwentị, eriri, ma ọ bụ ịntanetị, ma ọ bụ nkwupụta kaadị kredit / debit.
Naanị mara na ozugbo akaụntụ gị zuru ezu, ị gaghị enwe ike ịgbanwe nkọwa nkeonwe gị ọzọ. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọta onwe gị na ọnọdụ ebe ịkwesịrị imelite nkọwa ọ bụla gbasara onwe gị, ị nwere ike ịkpọtụrụ nkwado Markets.com maka enyemaka. Ọzọkwa, dịrị njikere inye ha akwụkwọ ndị ọzọ iji kwado arịrịọ gị.
Akụkụ nke usoro ndebanye aha ga-ahọrọ n'etiti ọtụtụ nhọrọ akaụntụ. Ihe ndekọ ndị ị ga - ahọrọ ga -
Ezigbo Akaụntụ: Akaụntụ ahịa ndụ na-ebi ndụ.
Akaụntụ Akaụntụ: Akaụntụ omume nke bụ n'efu ma dị maka oge na-enweghị njedebe.
Gbanwee Akaụntụ Free: Akaụntụ enyi na Alakụba. Arụ ọrụ n'ime iwu Alakụba nke iwu na-enweghị ọmụrụ nwa.
Ihe ndekọ ndị a niile na-enye otu atụmatụ dịka webinars, nyocha ahịa kwa ụbọchị, na nkwado ndị ahịa 24 na-enwe nkeji dị iche na ebe a.
Etu esi ahia na Markets.com
Maka ndị na-ahọrọ ngosi ngosi nke otu esi azụ ahịa na Markets.com, weebụsaịtị ha na-enye vidiyo vidiyo nke otu esi azụ ahịa. Maka ndị na-ahọrọ nkọwa ederede, lee usoro ndị a:
Họrọ ihe onwunwe site na iji ndepụta ahụ n'akụkụ aka ekpe nke usoro ịzụ ahịa. Họrọ ihe onwunwe ga-eme ka akụ ahụ pụta na etiti ihuenyo yana ozi dị mkpa na ụkpụrụ.
N'akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ, ị ​​ga-ahụ nhọrọ maka ịzụrụ ma ọ bụ ire ngwa ahịa ahụ. Pịa ịzụta ma ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ịzụrụ ihe dijitalụ na ire ma ọ bụrụ na ịchọrọ ire ihe onwunwe nke dị n'aka gị.
A mmapụta window ga-apụta na nkọwa dị ka ịzụta na-ere ahịa, kacha nta ahia nha, trading na ọnọdụ, wdg N'oge a, ị nwere nhọrọ na-ahọrọ "elu" n'ihi na ndị ọzọ elu trading ụdị na nhọrọ. Dejupụta ụdị ma họrọ “Ebe Iwu.”
Nhọrọ ọzọ ị nwere ike iji mezuo ahia bụ ịkpọ oku oche Trading ozugbo ma tinye iwu na ekwentị. Agbanyeghị, mara na Trading Desk dị naanị na Bekee.
Ulo ahia nke Markets.com di na otutu asusu dika Arabic, Bekee, na Spanish. Ọzọkwa, ndị ahịa nwere nnwere onwe na mgbanwe iji họrọ ma ha ga-azụ ahịa na ntanetị weebụ ha Markets.com ma ọ bụ site na ngwa mkpanaka ha. Site na Web Trader, ịkwesighi ibudata ihe ndị ọzọ dịka ihe niile dịka ngwa ọrụ na njirimara dị elu dị na ntanetị. Iji ngwa mkpanaka, ịnwere ike ibudata ihe ole na ole.
Ngwa mkpanaka dị maka ndị ọrụ gam akporo na IPhone. The ngwa bụ mbido-enyi na enyi na-adabere ná magburu onwe technology. Platformlọ ahịa na-akwado ahia na MetaTrader 5 (MT5) nke bu oke ahia nye ndi okacha amara ahia. Ọzọkwa, ikpo okwu na-enye nhazi ọkwa dị elu dịka nhọrọ n'etiti ọchịchịrị ma ọ bụ isiokwu ọkụ. Iji nweta ihe ndị a, gafee na 'Akaụntụ M na Ntọala' wee họrọ 'Atụmatụ Platform.'
Markets.com bụ akụkụ nke Tradetech Markets Pty Ltd nke dị na Australia. Tradetech Markets Pty Ltd na-ahụ maka ụlọ ọrụ Australian Securities and Investments Commission.
Tradetech Markets Pty Ltd na Safecap Investments Ltd bụ ndị enyemaka nkePlaytech PLC. Edepụtara Playtech na LSE (London Stock Exchange) ma bụrụkwa akụkụ nke FTSE 250 Index.
Na mpaghara Europe, SafecapInvestmets Ltd na-achịkwa ya nke ndị FSCA na CySEC na-elekọta. Rlọ ahịa na ndị ahịa ọkachamara na mpaghara a nwere ike ịnweta ihe ruru 1:30 na 1: 300 n'otu n'otu. Enwekwara ego nkwụnye ego ruru 20,000 Euro.
Na mpaghara Africa, ọ na-achịkwa ya TradeTech Markets Pty Limited South Africa. Yabụ, ọ bụ ndị South Africa FSCA (Financial Sector Conduct Authority) na-ahụ maka ya. Ndị ọrụ nọ na mpaghara a nwere ike ịnweta ihe ruru 1: 300 ma nweta ego nkwụnye ego mbụ dịka 35%.
N’Australia, AutralianTradetech Markets Pty Ltd na-achịkwa ya.Ọ bụ ASIC na-ahụ maka ya. N’Australia, ndị ọrụ na-enweta ikike inweta ihe ruru 1: 300 na ego nkwụnye ego nke mbụ dịka 20%. Maka mpaghara niile, Markets.com nwere atụmatụ akpọrọ Negative Balance Protection nke na-edebe ego ndị ahịa na akaụntụ akụ iche iche maka nchekwa agbakwunyere.
Fegwọ na Limits.com
Dabere na ọtụtụ mkpesa sitere n'aka ndị ọrụ, ikpo okwu dị oke ọnụ ma ọ bụghị asọmpi n'etiti ndị isi ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka ahịa CMC ma ọ bụ IG. Mgbasa kacha nta dị karịa nkezi. Digital ego kacha nta na-agbasa bụ ndị kasị elu na Europe na 140 pips maka Bitcoin na 15 isi maka Ethereum.
Withdọrọ ego n'efu ma enwere ike ịnata n'etiti ụbọchị 2 ruo ụbọchị azụmahịa 5. Akaụntụ nwere ọnwa atọ arụghị ọrụ na-akwụ ụgwọ ihe dịka $ 10 kwa ọnwa. Ego a na - ezobe ego a ka ọ ghara ikpughere ya dịka ego fọdụrụ. Market.com na-edebe ndepụta emelitere nke mgbasa na ntinye ikike na weebụsaịtị ha.
Markets.com mentzọ ịkwụ ụgwọ
Markets.com na-enye nhọrọ sara mbara nke ụzọ nkwụnye ego. Ndị a gụnyere:
A pụkwara iji otu ụzọ nke ntinye ego dị n'elu wepu. Agbanyeghị, iji rịọ ka ị kwenye na iwu na-agbanyeghị ego, Markets.com na-ekwusi ike na a ga-ewepụ ego site na otu usoro ejiri etinye. N'ụzọ dị mma, ọ na-efu ihe ọ bụla iji wepụ. Edepụtara ihe kacha mkpa iji wepuo ihe ndị a:
Chọrọ opekempe nke 10 USD / GBP / EUR iji wepụ site na kredit ma ọ bụ kaadị debit.
I choro opekempe nke 5 USD / GBP / EUR iji wepu ya site na Neteller ma obu Skrill.
Chọrọ nke opekata mpe nke 100 USD / GBP / EUR iji wepụ site na nnyefe waya.
Oge nkwụsị na-adịgasị iche dabere na usoro ịkwụ ụgwọ a na-eji. Ha niile dinara n'otu ụlọ ọrụ nke ọtụtụ ụbọchị azụmaahịa nke na-adịkarị n'etiti ụbọchị azụmahịa 2-5.
Nkwado Ndị Ahịa Markets.com
Ọ na-enye nkwado 24/5 nke enwere ike ịnweta site na nkata ma ọ bụ site na ibe ịkpọtụrụ na saịtị ọrụ ha. Can nwekwara ike ịchọta peeji nke 'Kpọtụrụ anyị' na saịtị ha na ala nke ibe ahụ ma ọ bụ n'akụkụ aka nri nke ibe 'Ebe Nkwado'. Ibe 'Nkwado Center' mepekwara ka a Ajụjụ tinyere kọntaktị ha na njikọ nkata ha. A na-eji peeji nke Markets.com Facebook na Twitter mee ihe maka ahịa na nkọwa.Maka nke ọzọ, ebe ọ bụ na ahịa.com zuru ụwa ọnụ, ọ bụ nkwado dị ọtụtụ asụsụ ma na-abịa n'asụsụ dị iche iche dị ka Spanish, Bekee, French, Italian, German, Arabic, na Bulgarian.
Markets.com nwere ọtụtụ ihe nyocha na akụrụngwa ndị bara uru maka ndị ahịa mbido. Enwere ike ịnweta ihe ndị a na ngalaba Mmụta. Ọrụ ndị ọzọ dị n'elu ikpo okwu gụnyere:
Ihe na ahia
Niile atụmatụ ndị a dị n'elu na-enyere gị aka ịmụta otu esi azụ ahịa, site na ịchọta ohere ndị nwere ohere iji duzie nyocha ahịa miri emi. Imirikiti ngwaọrụ ndị a nwere ike ịnweta site na ikpo okwu azụmaahịa na akaụntụ egosipụtara. Ọzọkwa, ndị ọrụ nwere ike ịnweta nri akụkọ ozi ozugbo site na ikpo okwu.
N'ụzọ dị mwute, ikpo okwu enweghị ndokwa maka mkparịta ụka ma ọ bụ ụlọ ebe ndị ahịa nwere ike itinye aka na azụmaahịa mmadụ. Ọ bụ ihe ihere n'ihi na atụmatụ ndị a na-enyere aka maka ndị ahịa novice chọrọ ịgbanwe echiche ma nwee echiche siri ike kọwara. Tụkwasị na nke a, ikpo okwu adịghị enyekwa ahia na-akpaghị aka nke nwere ike inye aka maka oge mgbe ndị ahịa chọrọ nkwụsịtụ ịzụ ahịa.
Markets.com na-enye ma ndị mbido na ndị ọkachamara nwere ikike azụmaahịa gbasara akụ 2,200 sitere na otu ikpo okwu. Ọzọkwa, usoro ntinye aka na akaụntụ ha dị ngwa na ngwa ngwa. Ndị mbido nwere nhọrọ agbakwunyere nke ịnwale akaụntụ ngosipụta iji nweta mmetụta nke ikpo okwu na-efughi ego ha. Ha ahia n'elu ikpo okwu bụ onye ọrụ kensinammuo na-enye a ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke isi na oru analysis ngwaọrụ ndị ọrụ. Ọzọkwa, a na-achịkwa ikpo okwu n'ọtụtụ mpaghara na mpaghara dị iche iche wee chebe ahịa.
Bekee, Spanish, French, German, Turkish, Polish, Portuguese, Italian, Dutch, Chinese, Arabic
CFD, Forex, Crypto, Ebuka
Safecap usoro FSB, CySec